PAUL RABARY : “Tsy nety nandoa « écolage »” | Madatopinfo
PAUL RABARY : “Tsy nety nandoa « écolage »”
Tongotra ambian-dakana ! Efa vita ny fanambarana ofisialy ary voarain’ny tomponandraikitra rehetra ny fametraham-pialana tao amin’ny antoko HVM na Hery Vaovao an’i Madagasikara, araka ny fanombohan’ny fitenenan’ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena teo aloha, Paul Rabary. Ny fanehoan-kevitra niarahany tamin’ny mpanao gazety izay natao teo Antaninarenina ny marainan’ny 25 Jolay teo dia nentina nilazana ny antony mba ho ren-tany ho ren-danitra. « Tsy nety nandoha “écolage”, tsy nahafeno Coliséum Atsonjombe ny HVM nefa nahatratra 40.000 ny mpampianatra FRAM noraisina ho mpiasam-panjakana, tsy naharesy lahatra ny mpampianatra sy ny mpiasan’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena hiditra amin’ny antokon’ny Fitondrana izay mijoro, tsy nanatrika sy tsy nankasitraka ny fihaonamben’ny Hery Vaovao an’I Madagasikara tamin’ny Renivohi-paritra izay avy nanaovana Filankevitry ny Minisitra tahaka ny tany Mahajanga, Fianarantsoa…”. Ireny no teboka vaventy nahatonga sy nisehoan’ny disadisa teo amin’ny antoko manohana ny Filoha ankehitriny sy ity mpandinika fiaraha-monina ity, araka ny fanambaran’ity farany tamin’ny mpisan’ny haino aman-jery.
Nanizingizina izy fa sitrapon’ny mpiasam-panjakana ny miditra amin’ny antoko iray, tahaka ny fahafahana amin’ny fivavahana fa tsy azo teren’ny Fitondrana. Tsy nanana olana tamin’ireo mpanolotsaina manokana, tahaka ny fianakavian’ireo Minisitra hafa na mpanolotsaina manokana ny Repoblika izay tendry avy any ambony hiara-hiasa taminy tao amin’ny Ministera izy fa nanatanteraka baiko hatrany, na dia teknisianina aza no niriny sy ny olona avy aminy. Nahitsiny ihany koa fa manentana ny mpampianatra mba handray ny asany izy, hitsinjovana ny taranaka amam-para, tsy araka ny feo miely fa izy no ao ambadiky ny mpampianatra izay mitokona ankehitriny. Anisan’ny nivoitra tao Antaninarenina fa tsy nandroaka na namindra toerana mpiasam-panjakana mpitari-tolona, toa an’ny DREN Analamanga, ho eny amin’ny kianjan’ny 13 Mey izy na dia nisy tsindry tokony hanatanterahana izany aza. Tsy nampandoha « écolage » ireo mpiasam-panjakana ambony tahaka ny talem-paritra ity Minisitra ity.
Midika izany rehetra izany fa vaky tam-batolampy ny kitranoantrano sy ny tsipaipaika amin’ny lafiny “bizina” ho an’ny Fitondrana izay endrika kolikoly avo lenta. Fitadiavam-bola no manjaka fa tsy ny fitiavan-tanindrazana. Manonitra ny lany tamin’ny endrika fampielezan-kevitra maro sy mameno ny paosiny amin’ny “fampiasana vola mitady vola” no ataon’ny mpitondra. Marihina anefa fa tsy vao ny fitondrana izay mijoro ankehitriny no nisian’izany. Raha tsy manao afera ireo ratsamangaika mba hitazomana ny toerany sy handoavana ny “écolage” amin’ny lehibe dia hovoailika avy hatrany. Midika ity tenin’ny Minisitra ankehitriny ity fa tsy hijanona ela ao amin’ny fitondrana ny olomarina sy ny tena tia tanindrazana. Nanipika moa izy fa ny “PSE” na ny « plan sectoriel de l’enseignement » no asany fa tsy hanova HVM ny mpiasan’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena. Io drafi-pampianarana io no anisan’ny nahazoana famatsiam-bola goavana indrindra tamin’ny fitondrana izay mijoro ka natao tohatra fiakarana ny Minisitra Paul Rabary, noesorina rehefa azo izany tombotsoben’ny Fitondrana izany.
Tsy noho izy nalana ho Minisitra no nahatonga azy nanatsikafona ny olan’ny HVM fa efa ela, efa nandritra izay naha-Minisitra azy izay no nahatsikaritra ny olana, tahaka ny fanjakazakan’ny olomboatendry fa tsy fanomezana andraikitra ireo olom-boafidy tahaka ny Ben’ny Tanana izay mitondra ny loko HVM ao amin’ny antoko. Eo am-pandrafetana ny vinam-piarahamonina sy ny fihainoana ny vahoaka amin’ny fidinana any ifotony ity mpandinika ny fiaraha-monina ity ho amin’ny ho aviny ara-politika. Nahavita 900 km izy nihazo an’i Tsiroamandidy, Beravina, Morafenobe,… tamin’ny alalan’ny “Moto”, tao anatin’ny herinandro. Nampanantena ny Minisitra Paul Rabary fa mbola hiantso mpanao gazety mikasika ho firotsahany ho fidiana. Midika izany fa mbola mijanona ho sihosihon-dresaka avokoa ny feo mandeha fa ho anisan’ny kandidan’ny Filoham-pirenena izy na ho Solombavam-bahoakan’ny Manjakandriana.
ANGOVO AZO HAVAOZINA: Hampiharina eto amin’ny Faritra Diana
ANDRO IRAISAMPIRENENA HO AN’NY ZON’OLOMBELONA: Nomena sehatra manokana ireo sahirana
HAONA FY : Tranoheva 200 no hita mandritra ny telo andro